मधेशमा आक्रमणको केन्द्रमा रहेका ओली एकै पटक राजनीतिको केन्द्रमा, घृणा मायामा रुपान्तरित मधेशमा आक्रमणको केन्द्रमा रहेका ओली एकै पटक राजनीतिको केन्द्रमा, घृणा मायामा रुपान्तरित Esimana.com || Simana Media Pvt. Ltd.
6/4/2021 गते 00 00 मा प्रकाशित 494 पटक पढिएको
मधेश हाम्रो हो भनेर जिम्मा लिएको ठान्नेहरुकोलागि सबैभन्दा घृणाका पात्र थिए के.पी.ओली । । ०७२ को मधेश आन्दोलनमा मुलुकको शासनको बागडोर थियो सुशील कोइरालाको हातमा तर आक्रमणको निशानामा थिए के.पी.ओली । ०७२ असोजमा के.पी.ओली प्रधानमंत्री भएपछि त कुरा बेग्लै हुने नै भयो ।
“के.पी ओली हाय हाय मार जुत्ता ढाय ढाय ” नारा यस्तै खालका थिए । ट्रयाक्टरको अगाडि के.पी.ओलीको तस्विर राखेर जुत्ताले हान्दै मितेरी पुल सम्म जाने उपक्रम निकै दिन चल्यो ।
०७२ को संबिधान प्रति असहमती राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका मधेश केन्द्रीत दलले गाउँ गाउँ बाजा बजाएरु नेकपा एमालेलाई लखेटे एमालेको कार्यक्रम हुन दिएनन । एमालेका कुनै नेता बीरगंज आउने हल्ला के मात्र चल्थ्यो ।
लोकतानित्रक मधेशी मोर्चाको नाममा बिज्ञप्ति जारी हुन्थ्यो एमालेको कोही नेतालाई पर्सा जिल्ला प्रवेशमा निषेध गरिएको छ । प्रवेश गरे प्रतिकार गरिनेछ । यस्तै यस्तै । लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रको यस्तो हुर्मत लिइदा पनि कोही लोकतन्त्रवादीलाई लज्जाबोध भएन ।
जसको लाठी उसको भैसी भन्ने मान्यता नै लोकतन्त्र हो भने जस्तो भयो । समयको गतीसंगै नेपाली राजनीतिमा घृणाको त्यो प्रवृति “माया” रुपान्तरण भयो ।
“अभि नही तो कभी नही” भन्नेहरु पालै पालो सत्तारोहण गरे । शायद त्यसैलाई भनिएको होला अभि नही तो कभी नही । मधेशका धुरन्धर बिद्वानहरुले के.पी.ओलीले त्यतीबेला दिएको अभिब्यक्तिलाई मधेशी स्वाभिमान संग जोडेर ब्याख्या मात्र गरेनन राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुदैनन भन्ने स्थापीत मान्यताको खिलाफमा गएर सामुदायिक रुपमा घृणालाई बढावा दिने काम गरे ।
जुन रुपमा के.पी.ओली मधेशमा आक्रमणको केन्द्रमा थिए आज तिनै के.पी. ओली मधेशको राजनीतिको केन्द्रमा छन जाहा घृणा होइन सम्मान देखिन्छ । उपेन्द्र यादवको सत्तारोहण अहिले महतोको नेतृत्वमा भएको सत्तारोहण त्यसकै अनुपम नमुना हो ।
राज्यले मधेश आन्दोलनका क्रममा समातिएका ,मुद्धा चलाइएका कार्यकर्ताहरुको मुद्धा फिर्ता लिने सम्झौता आन्दोलनकारी दलहरुसंग वा मोर्चा संग गरेको छ ।
त्यो सम्झौतालाई पालना गर्ने इमान्दार प्रयास बरु के.पी.ओलीले नै गरे । नागरिकताको बिषमा संबिधानले गरेको ब्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत भएपनि के.पी.ओलीले नै एने ल्याउने आँट गर्दै मधेशी नागरिकको सम्मान र पहिचानको बिषयलाई सम्बोधन गरे ।
बिस्तारित मंत्रीमण्डलमा आधा आधीको हैसियतमा मधेश मंत्रीमण्डलमा समावेश भएको छ । आजको दिनमा आइपुग्दा सबै भन्दा घृणाको पात्रको रुपमा रहेका ओली सबै भन्दा प्रिय हुन सकेका छन । यो उनको राजनीतिको जीत हो । सत्ता त प्राविधिक कुरा हो । त्यसमा आज ओली अरु कोही भोली ।